၁၉ နှစ် - ED၊ စိတ်ဓာတ်ကျ၊ လူမှုဆန့်ကျင်မှု၊ အဆင့်အတန်းမကောင်းဘူး၊
- ကျွန်ုပ်သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၌အသစ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည် porn, ED နှင့်ကျွန်ုပ်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်၏ပုံပြင်ကိုအစတွင်ဖော်ပြရန်တွန့်ဆုတ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ငါ့ဘဝ၏ gritty အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရပ်တန့်ဖို့ငါသွားသောခရီးသို့သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ။ (ဒီ post ကအရမ်းရှည်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမစွန့်ခွာချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါပြန်ကြည့်လို့ရတယ်)
ကျွန်မပတ်ပတ်လည် 10 နှစ်အရွယ်မှာဒါဟာအားလုံးစတင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကကျွန်မ၏မိတ်ဆွေအင်တာနက်ပေါ်မှာငါ့ကိုအချည်းစည်းမိန်းကလေးတစ်ဦးရုပ်ပုံလွှာပြသ, ငါချက်ချင်းအတွက်ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ငါက porn မှာအဘို့ငါအရမ်းနုပျိုခဲ့ကြောင်းကိုကြည့်ဖို့မကောင်းတဲ့ခဲ့သိကအားလုံးပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖန်ဆင်းသော ကြည့်။ အဘယ်အရာကိုဖွင့်မိန်းကလေးများအဝတ်အချည်းစည်းဓါတ်ပုံတွေမှာရှာဖွေနေအဖြစ်စတင်လျင်မြန်စွာဆိုးရွားလာခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ဖို့အချိန်သိပ်မကြာခဲ့ဘူး၊ ဒါကငါတောင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါငယ်ငယ်တုန်းကညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အမှောင်ထုထဲမှာဖုံးလွှမ်းနေလို့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တကယ့်အဆက်အသွယ်ကြီးထွားဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး။ ကျွန်မအသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာကျွန်ခံဖို့သွားနေတယ်၊ ငါ့ကိုထုတ်ပါ ငါမိန်းကလေးတွေကိုတကယ်စကားမပြောနိုင်ဘူး၊ ငါဟာလူတွေကိုအမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်၊ ​​ပြီးတော့ငါ့ရဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုခုရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့အဲဒီအချိန်မှာငါမှန်းတောင်မသိခဲ့ဘူး။
ဒီအချိန်လောက်မှာကျွန်မအပျိုစင်ဘဝကိုတကယ်ဆုံးရှုံးချင်ခဲ့တယ်၊ လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ အရာတစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုဆီသို့ ဦး တည်သွားပြီးကျွန်ုပ်တို့အိပ်ရာထဲတွင်အဝတ်အချည်းစည်းရှိခဲ့သည်။ ငါ horny မရနိုင်ဘူးကြောင့်ကြောင့်စိုက်ထူရနိုင်ဘူး။ သူမကအနည်းဆုံးပြောရန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသောကြောင့်ဤကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်သောအခါသင်သည်တာဝန်ကိုချက်ချင်းအကြောင်းပြပြီးဖြစ်သည်။ “ သူမပူတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါသူနဲ့လိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူး” လို့ကျွန်မထင်ခဲ့တယ် ဒါမှမဟုတ် "ငါအရမ်းကြောက်လန့်နေတယ်။ " ငါပစ်မှတ်ကိုချွတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်
ဒီအတွေ့အကြုံကကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုပျက်ပြားစေခဲ့တယ်၊ ငါ CRAP လိုခံစားခဲ့ရတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ကွဲပြားခြားနားသောမိန်းကလေးများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားရှိမည်နှင့်တဆင့်တွန်း။ ငါဟာမိန်းကလေးတွေကိုရွေးတာနဲ့ဆွဲဆောင်မှုဆိုင်ရာသိပ္ပံကိုလေ့လာပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ PUAs (ပစ်ကပ်အနုပညာရှင်တွေ) အကြောင်းအများကြီးဖတ်ပြီးလေ့လာခဲ့တယ်။ ဒီတော့အခုကျွန်တော်ဟာကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့နေရုံသာမကပဲကျွန်မဟာ PUA စာပေကကျွန်မကိုဆွဲဆောင်ထားတဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အမြင်တွေကိုအရှိန်မြှင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့စိတ်ပညာဟာလည်းရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်။ ငါကတကယ်ကောင်းတဲ့ပန်းချီဆရာဖြစ်ပေမယ့်ပန်းချီကားမရှိတာနဲ့တူတယ်။ ငါအခန်းထဲမှာတွေ့တဲ့မိန်းကလေးအများစုနဲ့ချိတ်ဆက်မိနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အိပ်ခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါငါအရမ်းခက်မှာကိုကြောက်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်သို့သွားခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့ပြီးအစာရှောင်ခြင်း၊ ရေပိုသောက်ခြင်း၊ စိတ်ပညာစာပေများကိုရှာဖွေခြင်း၊ DHEA ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုစားသုံးခြင်း၊ ငါစိတ်ဓာတ်ကျပြီးစိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်ခဲ့ပြီးလိင်ကိစ္စမပါတဲ့သက်ရှိထင်ရှားဘဝဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားခဲ့တယ်။ ကံကောင်းတာကကျွန်တော်အလွယ်တကူလက်မလျှော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါတတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါအထက်တန်းကျောင်းမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရခဲ့တယ်။ သူမဟာအပျိုစင်တစ်ယောက်ဖြစ်တော့လိင်ဆက်ဆံဖို့အလျင်စလိုမရှိခဲ့ဘူး။ သူမကငါ့ကို bj ရဲ့အချိန်တိုင်းပေးလိမ့်မယ်၊ ငါသူတို့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားရတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးတယ်။
ယခင် gf သည်မွေးဖွားခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးသူမသည်သူမအားနောက်ဆုံးတွင်လိင်ဆက်ဆံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်မေးခွန်းမှာ“ ငါလိင်ဆက်ဆံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား” ဖြစ်သည်။ (ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောကြိမ်များဖြစ်စေခဲ့သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ပင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်ကောင်းသောစိတ်ကူးကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး၎င်းအစားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးမှာအလွန်မှောင်မိုက်လာပြီး၊ တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီ။ )
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဝတ်အချည်းစည်း ရှိ၍ လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ ကွန်ဒုံးကို ဆက်၍ မထားနိုင်တော့သည့်အတွက်နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်၏လိင် drive ကိုထပ်မံဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်။ ငါပျက်စီးခဲ့သည် နောက်တစ်လအကြာမှာသူမသူမကိုကျွန်မမထိုးဖောက်နိုင်ဘူးလို့မထင်စေချင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဆင်ခြေဆင်ခြေပေးလိုက်တယ်။ သူမသည်အငယ်တန်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်အကြီးတန်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်တက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုအဝေးမှဝေးဝေးနေရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
ဒါဟာတူညီတဲ့ပုံစံအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောမိန်းကလေးများနှင့်အတူအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့ငါဒီတော့စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ငါမိန်းကလေးငယ်များစကားပြောဖို့ကြိုးစားနေရပ်တန့်နိုင်အောင်ကူကယ်ရာမဲ့သလိုခံစားရတယ်။ တစ်ခုခု Crazy ကောလိပ်ပထမနှစ်မှငါ့ချိုးအိမ်မှာအပေါ်သော်လည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါမှတော်တော်လေးနီးစပ်ခဲ့သောငါ၏ရပ်ကွက်အတွင်းမှဤမိန်းကလေးကျော်တို့သည် လာ. ကျွန်တော်ဗော့ဒ်ကာစုံတွဲတစ်တွဲရိုက်ချက်များသောက်၏။ ကျနော်တို့အခန်းထဲမှာအပေါ်ထပ်ရှိကြ၏နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖူးစိတျထဲတှငျစောင့်ရှောက်လော့။ ကျွန်မသူမအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကိုအကောင်းဆုံးခံစားမှုခဲ့ကြောင်းသူမ၏အသက်တာ၌တစ်ဦးအတှေ့အကွုံစိတ်ကူး, ငါ့ဖို့ကကိုဖော်ပြရန်သူမ၏သို့ပြောသည်။ ထိုအခါကိုယ့်အခုအချိန်မှာကြောင်းခံစားမှုကြိုးစားခံစားရရန်သူမ၏သို့ပြောသည်။ ငါသူမ၏ horny နှင့်လိင်များအတွက်စိတ်ဓါတ်များရရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ အိုင်တီအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မအပေါ်ကွန်ဒုံးကိုတင်ပြီးမှတဖန်အပျော့တယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်ကဝက်အူကလည်း, ကချွတ်ယူကြ၏။ ကျနော်တို့လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသူသည်ငါ 18 ခဲ့, ငါထိုးဖောက်မှုနှင့်အတူစစ်မှန်သောလိင်ခဲ့ကြပါပြီပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အိုင်တီငါဖြစ်ကောင်းစဉ်ခံစားခဲ့ရငါ့ကို FOR စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးအရာကတော့ဖွစျသညျ။
ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါအရမ်းခံစားရတယ် ငါ့ရဲ့ပြproblemနာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရတယ်။
ငါနောက်ကျောကောလိပ်မှ သွား. ပြဿနာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ငါသည်ငါ့ porn ကိုဖြည့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတူတက်ထားတယျ။ ဒါဟာငါ့ကိုညအချိန်တွင်မအိပ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ တဖန်ငါကူကယ်ရာမဲ့နှင့် clueless ခံစားခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကငါကုထုံးသွားစတင်ခဲ့ပြီး, ငါသူမ၏ငါ့ခံစားချက်တွေကိုအကြောင်းကိုစုံတွဲတစ်တွဲကြိမ်စကားပြောပြီးနောက်သူမကငါ့ကိုလိင်စွဲလမ်းသို့ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်ပေးတော်မူ၏။ ဤသည်ငါ့ကိုငါကအကြောင်းတတျနိုငျသသလောက်သုတေသနများအတွက်ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်စိတ်အားထက်သန်မှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါအင်တာနက်ပှနှင့် yourbrainonporn တွေ့ရှိခဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဗီဒီယိုကြည့်။ , တစ်ခုခုနှိပ်လိုက်ခြင်းနှင့်ငါတစ်ခုခုမှပေါ်ခဲ့သိတယ်။
ငါ masturbating porn ကိုကြည့်, ဒါမှမဟုတ် 2, 2012 Nov အပေါ်မှာငါ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို အသုံးပြု. မရတော့တာပဲ။ ငါသို့သော် porn နှင့်အတူစုံတွဲတစ်တွဲကြိမ်ဘယ်တော့မှပြန်ရောက်သွားတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျွန်မအရက်မူးကြီးနှင့်ကိုယ့် masturbated, ဒါပေမယ့်မပုံရိပ်တွေအတူ။ ငါသည်ငါ့လက်ကိုအသုံးပြုချင်တယ်မေ့သွားရောကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်ကိုယ့်ကိုငါ့အိပ်ရာ humped ။ ဤအချိန်မှာလည်းတစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါစတင်ခဲ့ပြီးနဲ့ကျွန်မနံနက်သစ်သား get ကတည်းက၎င်း၏ 57 ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုခဲ့။ အကြှနျုပျ၏လိင် drive ကိုတိုးမြှင့်သည်နဲ့ကျွန်မငါ့ဦးခေါင်းအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေဆံ့ရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ငါအများကြီးပိုကောင်းခံစားရနှင့်ဤငါ့ကိုယူဘယ်မှာငါမြင်လိမ့်မည်။ တစ်ကြိမ်တစ်နေ့မှာ။
LINK - ဒီဇင်ဘာလ 29, 2012: အဘယ်သူမျှမ PMO သို့ 57 ရက်ပေါင်း
ငါ မှစ. ငါ့နာမကိုအမှီပြောင်းလဲပြီ Healingpath သို့ roadlesstravelled ။
ငါ မှစ. ငါ့ဂျာနယ်၏အမည်ကိုလည်းပြောင်းလဲပြီ အကြှနျုပျ၏ Crazy ခရီး သို့ ရွေးနှုတ်ခြင်းမှအဆိုပါလမ်း။
ငါ့အသက်ကို Self-ပရိယာယ်နဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုကိုယ်အပေါ်ချမှတ်ထားကြောင်းမလိုအပ်သောဆငျးရဲဒုက်ခနှငျ့ပွညျ့စုံပြီ။ ငါဖြစ်ပျက်ဖြေရှင်းပေးရန်နိုင်ရန်အတွက်ယူဖို့လိုအပ်သောခြေလှမ်းများယူပြီးနေပါတယ်။
ငါ PMO ဖြစ်ပေါ်စေသည်သောဆိုးကျိုးများကိုစိတ်ကူးခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ငါ့ဘဝ၏ရှောင်ကတည်းက immeasurably တိုးတက်လျက်ရှိသည်ဘူး။
ကျွန်ုပ်သည်ခန္ဓာကိုယ်အဆီ ၁၀% ရှိပြီးယခင်ကထက်ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီးကျန်းမာသည်ဟုခံစားရသည်
ငါနေဆဲ PMOing စဉ်တွင်:
လူတို့နှင့်အတူ socializing မုန်း၏
ငါ THEROADLESSTRAVELLED, ငါသည်လိင်-စွဲဖြစ်၏။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုဘဲရက် ၃၀ ။ အကြီးအယောက်ျားတွေ Feeling ။ ငါ PMO အရာတစ်ခုလုံးအပေါ်အလွန်အကျွံအာရုံစူးစိုက်ချင်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါခဏ၌ငါ့ဂျာနယ် updated ကြပြီမဟုတ်။ ငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှဝေးနေဖို့နေခဲ့ကြသောဤတိုတောင်းသောအချိန်ကာလအတွင်းဤမျှလောက်များစွာသောအရာပြောင်းလဲသွားတယ်။
ငါမရှိတော့အင်တာနက် browsing အဆုံးပေါ်နာရီအခန်းထဲမှာနေဖို့။
ငါ reddit မသုံးတော့ဘူး လုံးဝမ
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်၊ ပါတီပွဲလုပ်တာ၊ လူမှုရေးစိတ်မ ၀ င်စားတာကိုမခံစားရဘူး။
ငါသဘောသဘာဝအတွက်အလှတရားကိုသတိထားမိ။ ကျွန်မအတန်းအစားမှလမ်းလျှောက်စဉ်ကိုငါ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေရဲ့ရန်ကိုခံစား။ မြက်ပင်သည်စာသားစိမ်းလန်းတဲ့ကြည့်နှင့်ကောင်းကင်ပြာထက်ပိုအပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတွင်ငါသည်အကြောင်းကို3ရက်သတ္တပတ်များအတွက် paleo အစားအစာပေါ်ပါပြီငါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခံစားရသည်။ ကြှနျတေျာ့ကိုခြောက်အထုပ်ယခုသိသာမြင်နိုင်သည်, ငါ့မေးရိုးလိုင်းလုံးဝထွက်နှစ်ထပ်။
ငါကပိုစွမ်းအင်ရှိသည်နှင့်ငါပိုပြီးတပ်လှန့်နိုးခံစားရတယ်။ ငါ lethargy သို့မဟုတ်အစာအိမ်ကိုက်ခဲ၏အကြိမ်ကြိမ်ပြီ dont ။ ငါအရက်မသောက်ရသောအခါငါသာလိုခံစားရသည်။
ငါသည်လည်းအလေးမနှင့်တစ်ပတ်ကို cardio 3x လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်အားကစားရုံသို့တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်သွားရမည်။
ငါသည်ငါ့လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းကို ယူ. သူတို့အကြီးခံစားရသည်။
ရယ်စရာအရာ, ဘဝသောအရာတို့ကိုအတူတကွဆောင်ခဲ့တစ်လမ်းရှိပါတယ်။ ငါတရားအားထုတ် PMO ကနေပြန်လည်နာလန်ထူအရှိန်မြှင့်ကူညီနိုင်မ YBOP အပေါ်ကိုဖတ်ပါ။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောဘာဝနာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ကျွန်မကောလိပ်ကျောင်းများတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာလေ့လာမှုများကဒီစာသင်တာနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အများစုအတွက်ကျွန်တော့်ရဲ့ ၀ ိညာဉ်ရေးရာဟာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ငါဘုရားကျောင်းကိုစသွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကြီးပြင်းလာခြင်းမရှိသော်လည်းဘုရားကျောင်းသို့သွားခြင်းကကျွန်ုပ်၌ပင်ရှိမှန်းမသိသောခံစားချက်များကိုပေးနေပြီးကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းခံရသည်ဟုခံစားရသည်။
ယုတ္တိဗေဒကသင်၏အရူးကိုပြောသောကြောင့်သင်မှန်ပါသည်၊ ယုတ္တိနည်းအရဘာသာတရားသည်အခြေအမြစ်မရှိ၊ သို့သော်ယုတ္တိဗေဒသည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲတွင်ရှိသောအတွေးအခေါ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ရှုထောင့်အားကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂူနေအိမ်မှဘိုးဘေးများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုံးတမ်းဓလေ့များ (သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းဓလေ့များ၊ စွန့်လွှတ်မှုများစသည်ဖြင့်)
ဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ: ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အားသာချက်၏ fuck ဆိုတဲ့ကြင်နာတဲ့သင်္ဂြိုဟ်ရိုးရာဓလေ့သည်ငါတို့အဘို့ရှိသည်နိုင်ဘာလဲ? သို့တိုင်ကထုံးတမ်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှန်းကျင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်သားစဉ်မြေးဆက်ကိုဖြတ်ပြီးပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်း uncontested ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်အချက်ကတော့လူတွေဟာလုပ်တာတွေအတွက်လုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်စုံတစ် ဦး သည်ဘာသာတရားတစ်ခုသို့မဟုတ်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကိုယုံကြည်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သူတို့၌တန်ဖိုးအချို့ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူတို့ကိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဒါဟာဝိညာဉ်ကိုအာဟာရဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကမ်ဘာပျေါတှငျယုတ္တိအရှိဆုံးလူတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သင်မပျော်ရွှင်လျှင်အဘယ်သို့သောအချက်ကဘာလဲ?
ယူရန်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းသည်အလယ်လမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာကိုကျွန်ုပ်ပြောသောအခါကျွန်ုပ်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာအတွေးအခေါ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်။ သို့သော်ယုတ္တိဗေဒတစ်ခုတည်းကတစ်စုံတစ် ဦး ကိုမကျန်းမာစေပါ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်ရွှင်မှု၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနှင့်တင်းကျပ်သောဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အတွက်ယုတ္တိဗေဒကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အကျိုးမဖြစ်ထွန်းသော၊ ဒါနဲ့အလယ်လမ်းကိုငါအဆိုပြုထား။
အခုတော့ပြန်အဓိကခေါင်းစဉ်ဤ rant ကနေပြောင်းလဲဖို့, ငါလုပ်နေတာငါဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုအကြှနျုပျကိုကူညီပေးနေကြပါသည်ကြိုက်နှစ်သက်ခံစားကြရသည်။ ကျွန်မတစ်ဦးကအစစ်အမှန်မိန်းကလေးတစ်ဦးကအစစ်အမှန်ကို RELATIONSHIP ရှိသည်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအခုအချိန်မှာ relapsing စိတ်ပူမဟုတ်! ငါအစစ်အမှန်လိင်, မငါ့လကျနှငျ့လိင်ရှိသည်ချင်တယ်!
ငါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမဆိုကြင်နာခြင်းမရှိဘဲ, ပင်ရှည် porn မဆိုကြင်နာမပါဘဲ 30 ရက်ပေါင်းဝင်ကြပြီ။ ယခုငါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုချသွားနေပါတယ်။ သငျသညျယောက်ျားတွေ Love ။
LINK - အောင်မြင်မှု - မစ္စတာအပြာရောင်ဘောလုံးများမရှိတော့ပါ by healingpath
ရက် ၄၀ နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အော်ဂဇင်ကိုပြုလုပ်သည်။ သတင်းကောင်းမှာ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုသွေးဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါ BJ တယ်ငါတစျခုလုံးကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်!
တစ်ဦး BJ ရတဲ့စဉ်အများအားဖြင့်ငါ၏အဟောင်း gf နှင့်အတူငါဝက်ရွက်တိုင်မှာပျံသန်းလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ယနေ့လူကြီးလူကောင်း။
ငါခက်ခဲမရဘို့အဘယ်သူမျှမ bullshit ရှင်းလင်းချက်နှင့်အတူတက်လာစရာမလိုခဲ့ပေ။ ငါလိမ်စရာမလိုဘူး ည၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုသာယောက်ျားနှင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး စိတ်အေးစေဖို့ကြိုးစားနေကြသည်။
BTW, ဒီဟာဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသိပ်မြန်လွန်းရင်မလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။ ငါ့ဂျာနယ်မှာပါတဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမင်းကြည့်လိုက်ရင်မင်းနားလည်သွားမှာပါ။ ကောင်လေးငါမှားခဲ့တယ် သူမကကျွန်တော့်ကိုဘယ်လောက် sexy ဖြစ်စေ၊ ငါဘယ်လောက်အထိလှည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူမဆက်ပြောသည်။ ငါ BJ ပြီးနောက်ငါလာသောအခါသူသည်ပြီးမြောက်အောင်မြင်သည်ဟုခံစားရကြောင်းပြောခဲ့သည်။
ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေကိုငါလွမ်းတယ်။ ဘယ်တော့မှမ။ နောက်တဖန်မ။ ဤသည်အလွန်ကြီးစွာသောညဖြစ်ခဲ့သည်။